"Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; maraina no hivavahako aminao, ka hanandrandra aho." Salamo 5:3
"Andriamanitra ô, Andriamanitro Ianao; mitady Anao fatratra aho." Salamo 63:1
Isika ve mba toy ny mpanao ny Salamo 5, ka mahalala mivavaka maraina amin’Andriamanitra, hahazoana hery sy fahendrena, dieny vao miantomboka ny andro?
Sa kosa ve isika maika hisahana ireo asa maro miandry antsika, nefa tsy niomana ho amin’izany akory?
Raha mahatsapa isika fa ny andro tsirairay dia fotoana ahafahana manompo sy manome voninahitra an’Andriamanitra, dia hiondrika eo anatrehany, isa-maraina, mba hivavaka aminy. Hambara aminy izay manahirana sy mampahatahotra antsika. Hotsorina aminy ny fahalementsika sy ny tsy fahaizantsika. Hangatahina Izy hanavao ny fahatokiantsika Azy sy hampianatra antsika hanavaka ny tsara sy ny ratsy (Hebreo 5:14). Dia tena hihamaivana ny entana andavanandro! Hamaly ny vavaka ataontsika ny Tompo, ka hilamina sy ho tony isika, raha hiatrika ny tontolo andro.
Ny fahatsapana fa marefo isika sy ny fianteherana tanteraka aminy, izany no ahafahana manararaotra ny heriny sy ny zavatra tsy mety ritra ananany.
Ampahatsahivina mandrakariva fa ilaina ny mamelona amin’ny Mofon’aina ny toetrantsika anaty; ny fomba hahavitana izany dia ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra manambara ny fiainan’i Jesosy sy ny maha Izy Azy, mba ho vatsy dieny vao maraina. Kanefa aoka tsy ho hadino ny vavaka maraina; hitondra soa hatrany izany, mandritra ilay andro vao miantomboka.